Ụdị ụdị efere wafer nke China na -emepụta valvụ ụlọ ọrụ na ndị na -ebubata ya Ọdịnihu
Dual efere wafer ụdị ego valvụ
Nhazi na nrụpụta: DIN3352
Ihu na ihu: DIN3202-K3/API 594
Flanged njedebe: DIN 2501/BS 4504/ISO 7005-2 PN10/PN16, BS 10/AS 2129 Isiokwu D/E, JIS 2220 5K/10K, ASME B16.1 Klas 125 & B16.42 Klas 150
Ahụ, diski Nkedo ígwè/ductile ígwè/igwe anaghị agba nchara
Azuokokoosisi Nkedo ígwè/igwe anaghị agba nchara
Nke gara aga: DIN3352 F1 valvụ ụdị nlele valvụ
Osote: DIN nkedo ígwè bọl valvụ
Valve valvụ DIN
DIN3352 F1 valvụ nlele
DIN3352 F1 valvụ nlele elele
DIN3352 F1 valvụ ụdị nlele valvụ
DIN3352 F6 valvụ nlele
DIN3352 F6 valvụ ụdị nlele valvụ
DIN3352 valvụ nlele elele
Valvụ nlele ụdị DIN3352
Dual valvụ ego valvụ
Dual efere valvụ
Valve valvụ nlele okpukpu abụọ
Valvụ nlele F1
F1 elele valvụ
F1 elele ụdị valvụ
Valvụ nlele F6
F6 valvụ nlele
F6 ụdị valvụ nlele
Nyocha Valve Valve
valvụ ụdị ego valvụ
Ụdị Wafer Valve Valve
API esorowo nchara nlele valvụ
Njirimara nlele nchara nke API arụpụtara atụmatụ nke valvụ elele Bonnet, Swing na disk ebuli; Ebe a na-anọ anọdụ ala, mkpuchi mkpuchi na mkpuchi mkpuchi mkpuchi na-efegharị na ebuli diski, eriri oche ma ọ bụ welded Isi na njikọta Bonnet Ahụ na ọkpụkpụ nke valvụ nlele Class150-Class900 na-enwekarị studs na mkpụrụ. A na -ejikarị valvụ emebe akara akara mkpuchi gasket Igwe anaghị agba nchara+ ihe mkpuchi na -agbanwe agbanwe graphite ka a na -eji maka klaasị 150 ...
Valve Check Valve API
Valve API Valve Check Valve Njirimara valvụ elele Bonnet, Swing na disk ebuli; Ebe a na-anọ anọdụ ala, mkpuchi mkpuchi na mkpuchi mkpuchi mkpuchi na-efegharị na ebuli diski, eriri oche ma ọ bụ welded Isi na njikọta Bonnet Ahụ na ọkpụkpụ nke valvụ nlele Class150-Class900 na-enwekarị studs na mkpụrụ. A na -ejikarị valvụ emebe akara akara mgbachi Gasket Igwe anaghị agba nchara+ grafụ na -agbanwe agbanwe ejiri gasket eme ihe maka klaasị 150 na Clas ...
Nyocha Valve API Swing
API Swing Check Globe Valve Njirimara valvụ elele Bonnet, Swing na disk ebuli; Ebe a na-anọ anọdụ ala, mkpuchi mkpuchi na mkpuchi mkpuchi mkpuchi na-efegharị na ebuli diski, eriri oche ma ọ bụ welded ahụ na njikọta Bonnet Ahụ na ọkpụkpụ nke valvụ nlele Class150-Class900 na-enwekarị studs na mkpụrụ. A na -ejikarị valvụ emebe akara akara mkpuchi gasket Igwe anaghị agba nchara+ ihe mkpuchi na -agbanwe agbanwe graphite ka a na -eji maka klas 150 a ...
Valve API Swing Valve - Klas 150 & ...
API Swing Check Globe Valve API Swing Check Valve - Class 150 & Class 300 Swing Check Valve Njirimara nke valvụ nlebara anya Bonnet, Swing na disk diski; Ebe a na-anọ anọdụ ala, mkpuchi mkpuchi na mkpuchi mkpuchi mkpuchi na-efegharị na ebuli diski, eriri oche ma ọ bụ welded Isi na njikọta Bonnet Ahụ na ọkpụkpụ nke valvụ nlele Class150-Class900 na-enwekarị studs na mkpụrụ. valvụ na -emekarị nke pressurized akara imewe Gaske ...
Nyocha Valve API Swing - Klas 600 ~ Klas ...
API Swing Check Globe Valve API Swing Check Valve - Klas 600 ~ Klas 2500 Swing Check Valve Njirimara nke valvụ nlebara anya Bonnet, Swing na disk diski; Ebe a na-anọ anọdụ ala, mkpuchi mkpuchi na mkpuchi mkpuchi mkpuchi na-efegharị na ebuli diski, eriri oche ma ọ bụ welded Isi na njikọta Bonnet Ahụ na ọkpụkpụ nke valvụ nlele Class150-Class900 na-enwekarị studs na mkpụrụ. valvụ na -abụkarị nke nrụrụ akara akara gasket S ...
API Wafer Ụdị Valve Valve
Ụdị Wafer API Lelee Ụkpụrụ Valve 1.Dịpụta ma rụpụta: ap594 、 APi6D 2.Face ihu: API594, AP6D, DIN3202 3. Ntụle ọnọdụ okpomọkụ: ASME B 16.34 4. Nyocha na ule: API 598, API 6D 5.End akụkụ flange: ASME B16.5, ASME B16.47, AP605, MSS SP-44, ISO7005-1, DIN2543-2548 Nhazi atụmatụ I. Ọ dị mkpụmkpụ na ihu na ihu, na-adị l/4-1/8 ugboro nke valvụ ụdị nlele flange ọdịnala 2. Ọ na-emetụta oke nha yana ọkụ dị ihe dị ka ugboro 1/4-1/20 nke nke ọdịnala ...
Valve nlele nyocha DIN
DIN Swing Check Valve Swing valve valvụ emebere ma rụpụta ya dịka ụkpụrụ DIN3840 siri dị. A na -ejikọ pin na diski hinge n'ime ya na uru dị mma, akara a pụrụ ịdabere na ya. A na -eji ndagwurugwu nlele Swing maka pipeline na mmanụ ala, injinị kemịkal, ike na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Onye otu mmechi mepere ma mechie na -akpaghị aka na -adabere na nrugharị nke ọkara na ike iji gbochie refluence nke ọkara a na -akpọ valvụ ego. Lelee valvụ bụ ụdị ...
Igwe anaghị agba nchara bọl valvụ, Igwe anaghị agba nchara Gate Gate valvụ, Valve Gate Gate, Akuku Globe Valve, Valve Gate Valve, Ogwe bọọlụ Trunnion,